Rag u dhashay Burundi kuni biiri rabay Al-shabaab o lagu xiray Kenya | All idamaale News
Rag u dhashay Burundi kuni biiri rabay Al-shabaab o lagu xiray Kenya
Booliska Dalka Kenya ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen 4; Nin oo u dhashay Dalka Burundi kuwaas oo uu qorshahooda ahaa in ay ku biiraan Al-shabaab.
Shalay Gelinkii dambe ayaa lagu qabtay Bar koontarool oo ku taalal Degaanka Isiolo,halkaas oo ay Ciidamada baaritaan ku sameeyeen sidaasna ku heleen.
Booliska Kenya ayaa Bishii June gacanta ku dhigay 5; Kenyaan ah oo ku soo jeeday Soomalaiya kuwaas oo ay Ciidamada xireen kaddib markii ay heleen xogta dhallinyaradaaas oo ku sii socday Soomaaliya.
Ragga Burundeeska ah ee shalay la qabtay ayey Booliska Kenya sheegeen in loo wareejiyay Magaalada Nairobi ee xarunta dalkaas halkaas oo ay hadda Xabsi ku jiraan kaddibna ku wajihi doonaan Maxkamadda qaadda dacwadda loo heysto ee Argixisanimada.